Horudhac: Sheffield United vs Chelsea… (The Blues oo doonaysa inay sii wadato guuldarro la’aanteeda xiriirka ah ee Premier League) – Gool FM
Horudhac: Sheffield United vs Chelsea… (The Blues oo doonaysa inay sii wadato guuldarro la’aanteeda xiriirka ah ee Premier League)
(Sheffield) 11 Luulyo 2020. Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa u safreysa garoonka Bramall Lane, halkaasoo ay kula soo ciyaari doonto Sheffield United, iyadoo maanka ku haysa Blues inay guulo xiriir ah soo gaartay, isla markaana ay ka go’an tahay inay u soo baxdo ka qeyb-galka Champions League xilli ciyaareedka dambe.
Si kastaba ha noqotee, Blades ayaa Blues ku soo dhaweyneysa Yorkshire kaddib saddex kulan oo isku xigta oo aan laga badin, taasoo ka dhigeysa kooxda inay hal dhibic ka hooseyso kooxda kaalinta lixaad ee Wolverhampton Wanderers.
Taariikhda: Sabti 11 Luulyo 2020
Saacadda ay bilaabaneyso dheesha: 7:30 Fiidnimo xilliga geeska Afrika.
Garoonka: Bramall Lane
Garsooraha: Andre Marriner (England)
Kooxda Sheffield United ayaa qiimeyneysa John Fleck iyo David McGoldrick kaddib markii ay labadooduba dhaawac ku seegeen guushii Blades ee ay ka gaareen Wolves.
Oli McBurnie sidoo kale waa la kormeerayaa xaaladdiisa, isagoo qaatay 49 daqiiqo oo keliya ciyaaray Arbacadii daal dartiis.
Xiddiagha khadka dhexe ee Chelsea, N’Golo Kante iyo Billy Gilmour ayaa laguba seegaya kulankan, waxaana la filayaa in Gilmour uu garoomada ka maqnaado ugu yaraan saddex bilood.
Mateo Kovacic ayaa ku soo laabtay tababarka diyaar ayuuna u yahay kulankan, laakiin Fikayo Tomori ayaa weli dhaawac ku maqan.
>- Chelsea ayaa guuldarro la’aan ah unbeaten afartii kulan ugu dambeeyey ee dhexmaray labadaan kooxood, saddex kulan guul ayay gaartay, halka kulanka kale ay barbaro galeen, waxaana ay guuldarro la kulmeen afartii kulan ee markaas ka horreysay oo ay horyaalka la ciyaareen.
>- Sheffield United ayaa guuleysatay shan ka mid ah 7-dii kulan ee ugu dambeysay ee ay garoonkeeda kula ciyaareen Blues, inkasta oo ay Chelsea ku guuleysatay booqashadoodii ugu dambeysay ee ay ku booqato Bramall Lane bishii October sanadkii 2006, iyadoo tababaraha haatan ee Chelsea, Frank Lampard uu labadaba sameeyey dhalin iyo caawinba goolasha Chelsea.
>- Toddobadii ciyaar ee ugu dambeysay Premier League ee labadan koox dhex maray waxaa la iska dhaliyey 24 gool guud ahaan.
>- Sheffield United ayaa guuldarro la’aan ah saddexdeedii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka, labo kulan waa ay guuleysatay, halka kulanka kale ay barbaro galeen.
>- The Blades ayaa guuldarro la kulantay mid ka mid ah sagaalkeedii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka oo ay ku ciyaartay garoonkeeda Bramall Lane, waxaana ay wadataa 6 guul iyo 2 barbaro.
>- Sheffield waxa ay eegeysaa in afar kulan oo xiriir ah horyaalka Premier League ay garoonkeeda ku adkaato markeedii ugu horreysay.
>- Kooxda Chris Wilder ayaa guul la’aan a xilli ciyaareedkan, marka ay kulammada horyaalka ku wajahayso shanta kooxood ee ugu sarreysa, waxaana ay kala kulantay 2 barbaro iyo 6 guuldarro.
>- Chelsea ayaa guuleysatay lix ka mid ah siddeedii kulan ee la soo dhaafay horyaalka Premier League, waxaana ay la kulantay 1 barbaro iyo 1 guuldarro.
>- Waxa ay badiyeen shantii kulan ee ugu danbeysay ee Premier League ee Yorkshire waana guuldarro la’aan sagaalkoodii kulan ee ugu danbeeyay ee gobolka (7 Guul iyo 2 Barbaro)
>- Olivier Giroud ayaa dhaliyey afar gool lixdiisii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka, waxaana ka mid ah in labadii kulan ee ugu dambeeyey uu dhalinayey, xiddiga reer France ayaana kaliya afar gool dhaliyey 40 kulan oo markaas ka hor uu ciyaaray tartankan.
>- Christian Pulisic ayaa shabaqa soo taabtay saddex ka mid ah shantii kulan ee ay Chelsea ciyaartay horyaalka tan iyo markii dib loo bilaabay horyaalka.
>- Tammy Abraham ayaa dhaliyay saddex gool labadiisii kulan ee uu ka horyimid Kooxda Sheffield United.
>- Willian ayaa diiwaangeliyay afar gool labo caawin afartii kulan ee u dambeeyay.
Horudhac: Liverpool vs Burnley… (Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka galabta ka dhacaya garoonka Anfield)
Horudhac: Real Valladolid vs Barcelona… (Kooxda Barca oo doonaysa inay soo yareyso dhibcaha ay Real Madrid kaga hayso hoggaanka horyaalka La Liga)